နားလညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ ခဈြသူတဈယောကျဖွဈလာဖို့ အခွခေံ အခကျြ (၆)ခကျြ - For her Myanmar
ဆောငျရနျ ရှောငျရနျတှပေေါ့ ယောငျးရေ...
ကိုယျ့ဘကျက ခဈြသူအပျေါ လိုလသေေးမရှိ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျရငျ ရပွီ..ဒီလောကျဆိုရငျ သာယာပြျောရှငျတဲ့ အခဈြရေးဖွဈနပွေီလို့ သတျမှတျထားလို့ မရပါဘူး။ လူတဈကိုယျ စိတျတဈမြိုး ဆိုတော့ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ စိတျကို အမွဲတမျးအစိုးရဖို့တော့ မလှယျဘူးလနေျော။ ဆိုတော့ သူ့ဘကျကိုယျ့ဘကျ အမွဲညှိဖို့ လိုအပျနသေလို ကိုယျကလညျး နားလညျမှု အပွညျ့ပေးနိုငျဖို့ လိုသေးတာပေါ့… ဆိုတော့ကာ ဒီလို နားလညျမှု အပွညျ့ရှိနမေယျ့ ခဈြသူကောငျမလေး တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ ဒါလေးတှတေော့ လိုပွီနျော…
၁။ ဖုနျးကို ဝေးဝေးထားပါ။
ဒီဘကျခတျေမှာ ဖုနျးကွောငျ့ပဲ ခဈြသူတှေ အခငျြးခငျြးပွလေညျကွသလို ဖုနျးကွောငျ့ပဲ ပွဿနာတကျကွတာ မြားပါတယျ။ သူနဲ့ အတူတူရှိနရေငျ ဖုနျးကိုပဲ အာရုံစိုကျပွီး စာရိုကျ ပုံတငျတာတှေ ၊ အငျတာနကျဆောငျးပါး ထိုငျဖတျနတောတှကေ ပွဿနာ အကွီးစားနျော ယောငျးရေ။ သူနဲ့တူတူရှိတဲ့အခါ ဖုနျးကို တတျနိုငျသမြှ မသုံးဘဲ သူ့ကိုပဲ အလေးပေးပွီး တူတူရှိရတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးတှကေို မွတျနိုးတယျဆိုတာ ပျေါလှငျအောငျ ပွသရပါမယျ။ သူ့နားမှာ စိတျရောကိုယျပါ အမွဲရှိနတေဲ့ ခဈြသူကောငျမလေးမှနျး ထငျရှားစတေဲ့ အခကျြပေါ့။
၂။ သူစကားပွောရငျ အလေးပေး နားထောငျပါ။
တဈနတေ့ာမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အရငျးနှီးဆုံးလူကို ရငျဖှငျ့ခငျြတာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အလုပျအခွအေနေ၊ သူကွိုကျတဲ့ ဘောလုံးအသငျး ဒါမှမဟုတျ သူစိတျဝငျစားတဲ့ တခွားအကွောငျးအရာလေးတှကေို ပွောပွတဲ့အခါ သခြောလေး ဂရုစိုကျ နားထောငျပါ။ စိတျမပါသလို နားထောငျပွီး ခဏခဏ ပွနျမေးနမေယျဆိုရငျတော့ ကိုယျလညျး စိတျမရှညျဘူး ဟုတျ? သူ့ခေါငျးထဲက အတှေးတှနေဲ့ ထပျတူကတြဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ကိုယျ့ဆီမှာ ရှိနတေယျဆိုတာက သူ့ပျေါ နားလညျမှု ဘယျလောကျထိ မွငျ့မားတယျဆိုတာ ပွသရာရောကျပါတယျ။
Related Article >>> အသနျ့အရမျးကွိုကျတဲ့ ကောငျလေးကို ခဈြသူတျောထားရသောအခါ …
၃။ သူ့ကို စပရိုကျ (surprise) လေးတှေ တိုကျပါ။
မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အရာလေးတှကေို အံ့အားသငျ့သှားအောငျ ဖွညျ့ဆညျးနိုငျတာကလညျး ခဈြသူမိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့ အရညျအခငျြးတဈမြိုးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ တှဲလာတဲ့ Rs သကျတမျးကွာလာပွီး နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှကေ နညျးနညျး ပငျြးဖို့ကောငျးတယျလို့ ထငျလာရငျ ဒီလိုမြိုး စပရိုကျလေးတှေ တိုကျရပါမယျ။ သူကွိုကျတတျတဲ့ အရာလေးတှကေို အလိုကျတသိ ဖွညျ့ဆညျးပေးတတျတဲ့ ကောငျမလေးမြိုးရထားရငျ ဒီကမ်ဘာမှာ သူက ကံအကောငျးဆုံး လူသားလို့ မှတျယူသှားမှာပါ ယောငျးရေ။
၄။ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ ပေးထားပါ။ မခြုပျခယျြပါနဲ့။
လူတိုငျးကတော့ ခဈြရသူနဲ့ မခှဲအတူ ရှိနခေငျြတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ ခဈြသူကောငျလေးမှာလညျး သူ့ရဲ့ လှတျလပျခှငျ့ ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပြျောပါးခငျြတဲ့အခြိနျ ၊ သူ့ဘဝအတှကျ အခွား အရေးပါတဲ့အရာတှေ၊ ဝါသနာတှကေို ဖနျတီးခငျြမှာပါပဲ။ ဒီတော့ နှဈဦးကွားမှာ ဘောငျတဈခုထားပွီး သူဝါသနာပါရာတှကေို လလေ့ာလိုကျစားနိုငျတဲ့ အခြိနျလေး ပေးသငျ့ပါတယျ။
၅။ ဂဝြေငျတာတှေ လြှော့ပါ။
ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျ့နောကျကှယျမှာ စိတျခယြုံကွညျရတယျဆိုရငျတော့ မနာလို ဝနျတိုတာတှေ လြှော့ပါ ယောငျးရေ။ သူဘယျသှားလဲ ၊ ဘယျသူနဲ့ သှားတာလဲကအစ မယုံသင်ျကာ စဈမေးနမေယျဆိုရငျတော့ သူ့ကို မယုံကွညျကွောငျး ပွသလို ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီတော့ ဂဝြေငျတဲ့စိတျကို တဈဝကျလောကျ လြှော့ထားပါ။ ခဈြသူ သဘာဝ သဝနျတိုတယျ၊ ခဈြလို့ သဝနျတိုတယျဆိုပမေဲ့လို့ အမွဲတမျးလိုလို သဝနျတိုနမေယျဆိုရငျတော့ ယောငျးကိုယျတိုငျလညျး ပူလောငျရသလို သူလညျး စိတျကဉျြးကပျြပွီး စိတျပကျြသှားနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ရိုဆနျတယျ ထငျရပမေဲ့ တကယျတမျး အခဈြရေးမှာ ပွဿနာဖွဈနစေတေဲ့ အခကျြ (၆)ခကျြ
၆။ မလိုလားအပျတဲ့ ဒရာမာတှေ မဖနျတီးပါနဲ့။
အိမှနျတို့ စိတျတှကေလညျး ခကျသားနျော။ တဈခါတလဆေို ကိုယျ့စိတျကိုယျတောငျ အစိုးမရဘူး ဖွဈနတေတျတာမြိုး။ ကိုယျတောငျ ကိုယျ့စိတျကို အစိုးမရရငျ ကိုယျ့ခဈြသူကလညျး ကိုယျ့စိတျကို ဘယျလိုဖတျတတျတော့မှာလဲနျော… ဒီတော့ စိတျဆိုးလာရငျ အကွောငျးအရငျး မညျမညျရရ မပွောပွဘဲ စိတျကောကျနတောထကျစာရငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖွရှေငျးတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
အခဈြရေးမှာ အဆငျပွနေိုငျကွပါစေ ယောငျးတို့ရေ…
References: Live about, She Knows
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေပေါ့ ယောင်းရေ…
ကိုယ့်ဘက်က ချစ်သူအပေါ် လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင် ရပြီ..ဒီလောက်ဆိုရင် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးဖြစ်နေပြီလို့ သတ်မှတ်ထားလို့ မရပါဘူး။ လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုး ဆိုတော့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကို အမြဲတမ်းအစိုးရဖို့တော့ မလွယ်ဘူးလေနော်။ ဆိုတော့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အမြဲညှိဖို့ လိုအပ်နေသလို ကိုယ်ကလည်း နားလည်မှု အပြည့်ပေးနိုင်ဖို့ လိုသေးတာပေါ့… ဆိုတော့ကာ ဒီလို နားလည်မှု အပြည့်ရှိနေမယ့် ချစ်သူကောင်မလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒါလေးတွေတော့ လိုပြီနော်…
၁။ ဖုန်းကို ဝေးဝေးထားပါ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဖုန်းကြောင့်ပဲ ချစ်သူတွေ အချင်းချင်းပြေလည်ကြသလို ဖုန်းကြောင့်ပဲ ပြဿနာတက်ကြတာ များပါတယ်။ သူနဲ့ အတူတူရှိနေရင် ဖုန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး စာရိုက် ပုံတင်တာတွေ ၊ အင်တာနက်ဆောင်းပါး ထိုင်ဖတ်နေတာတွေက ပြဿနာ အကြီးစားနော် ယောင်းရေ။ သူနဲ့တူတူရှိတဲ့အခါ ဖုန်းကို တတ်နိုင်သမျှ မသုံးဘဲ သူ့ကိုပဲ အလေးပေးပြီး တူတူရှိရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေကို မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်အောင် ပြသရပါမယ်။ သူ့နားမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အမြဲရှိနေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးမှန်း ထင်ရှားစေတဲ့ အချက်ပေါ့။
၂။ သူစကားပြောရင် အလေးပေး နားထောင်ပါ။
တစ်နေ့တာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အရင်းနှီးဆုံးလူကို ရင်ဖွင့်ချင်တာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အလုပ်အခြေအနေ၊ သူကြိုက်တဲ့ ဘောလုံးအသင်း ဒါမှမဟုတ် သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ တခြားအကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြတဲ့အခါ သေချာလေး ဂရုစိုက် နားထောင်ပါ။ စိတ်မပါသလို နားထောင်ပြီး ခဏခဏ ပြန်မေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လည်း စိတ်မရှည်ဘူး ဟုတ်? သူ့ခေါင်းထဲက အတွေးတွေနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာက သူ့ပေါ် နားလည်မှု ဘယ်လောက်ထိ မြင့်မားတယ်ဆိုတာ ပြသရာရောက်ပါတယ်။
Related Article >>> အသန့်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးကို ချစ်သူတော်ထားရသောအခါ …
၃။ သူ့ကို စပရိုက် (surprise) လေးတွေ တိုက်ပါ။
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာလေးတွေကို အံ့အားသင့်သွားအောင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကလည်း ချစ်သူမိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတစ်မျိုးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ တွဲလာတဲ့ Rs သက်တမ်းကြာလာပြီး နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေက နည်းနည်း ပျင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်လာရင် ဒီလိုမျိုး စပရိုက်လေးတွေ တိုက်ရပါမယ်။ သူကြိုက်တတ်တဲ့ အရာလေးတွေကို အလိုက်တသိ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးမျိုးရထားရင် ဒီကမ္ဘာမှာ သူက ကံအကောင်းဆုံး လူသားလို့ မှတ်ယူသွားမှာပါ ယောင်းရေ။
၄။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားပါ။ မချုပ်ချယ်ပါနဲ့။
လူတိုင်းကတော့ ချစ်ရသူနဲ့ မခွဲအတူ ရှိနေချင်တာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ချစ်သူကောင်လေးမှာလည်း သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါးချင်တဲ့အချိန် ၊ သူ့ဘဝအတွက် အခြား အရေးပါတဲ့အရာတွေ၊ ဝါသနာတွေကို ဖန်တီးချင်မှာပါပဲ။ ဒီတော့ နှစ်ဦးကြားမှာ ဘောင်တစ်ခုထားပြီး သူဝါသနာပါရာတွေကို လေ့လာလိုက်စားနိုင်တဲ့ အချိန်လေး ပေးသင့်ပါတယ်။
၅။ ဂျေဝင်တာတွေ လျှော့ပါ။
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင်တော့ မနာလို ဝန်တိုတာတွေ လျှော့ပါ ယောင်းရေ။ သူဘယ်သွားလဲ ၊ ဘယ်သူနဲ့ သွားတာလဲကအစ မယုံသင်္ကာ စစ်မေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို မယုံကြည်ကြောင်း ပြသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ဂျေဝင်တဲ့စိတ်ကို တစ်ဝက်လောက် လျှော့ထားပါ။ ချစ်သူ သဘာဝ သဝန်တိုတယ်၊ ချစ်လို့ သဝန်တိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ အမြဲတမ်းလိုလို သဝန်တိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းကိုယ်တိုင်လည်း ပူလောင်ရသလို သူလည်း စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး စိတ်ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ရိုဆန်တယ် ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်း အချစ်ရေးမှာ ပြဿနာဖြစ်နေစေတဲ့ အချက် (၆)ချက်
၆။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဒရာမာတွေ မဖန်တီးပါနဲ့။
အိမွန်တို့ စိတ်တွေကလည်း ခက်သားနော်။ တစ်ခါတလေဆို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင် အစိုးမရဘူး ဖြစ်နေတတ်တာမျိုး။ ကိုယ်တောင် ကိုယ့်စိတ်ကို အစိုးမရရင် ကိုယ့်ချစ်သူကလည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ဘယ်လိုဖတ်တတ်တော့မှာလဲနော်… ဒီတော့ စိတ်ဆိုးလာရင် အကြောင်းအရင်း မည်မည်ရရ မပြောပြဘဲ စိတ်ကောက်နေတာထက်စာရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေရှင်းတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ…
Tags: better, follow, Girlfriend, Relationship, tips
တောမီးလောင်မှုအတွင်း နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ မိုင်လေဆိုင်းရပ်စ်
စီးပွားရေး စွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် အရေးပါတဲ့ Design Thinking